September 19, 2017 - TV Annapurna
पोर्चुगलमा हत्या भएका पर्वतका जिसीको अन्त्यष्टिकै दिन हत्यारा पक्राउ
September 19, 2017 September 20, 2017 Annapurna TV
पोर्चुगलमा छुरा प्रहारबाट हत्या गरिएका पर्वतका हरि बहादुर जिसीको अन्त्यष्टिकै दिन हत्यारा पक्राउ परेका छन । गएको मंगलबार राती हत्या भएका जिसीको हत्यारा धादिङ घर भएका अर्जुन सापकोटा हत्या गरेर फरार भएको एक हप्तामा पक्राउ परेका हुन । मृतकको अन्त्येष्टि गरेर फर्कने क्रममा लिस्वनको रोमास्थित पोखरा रेष्टुरेण्टमा सापकोटा पक्राउ परेका हुन । सापकोटालाई पोर्चुगलमा रहेका नेपाली समुदायका अगुवा नारायण थापा र राजकुमार गुरुङले समातेर प्रहरीमा बुझाएका छन । उता मृतक जिसीको आजै लिस्वनकै कामराते शवदाह केन्द्रमा अन्त्येष्टि भएको छ । अन्त्येष्टि अघि साओजोसे अस्पतालमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा नेपाली समुदायका प्रतिनिधीहरुको…
प्रचण्डलाई टेरेन परराष्ट्रले, विदेशी जेलमा रहेका कति नेपालीको उद्दार भयो ?
September 19, 2017 September 19, 2017 Annapurna TV
पछिल्लो तथ्याङक अनुसार विदेशी जेलमा अपराध गरेको अभियोगमा सजाय काटिरहेका नेपालीको सङख्या ३ सय ३४ छ । गएको जेठ महिनामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा भएको एक सर्वेक्षणले यस्तो तथ्याङक निकालेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अध्ययान अनुसन्धानमार्फत तयार भएको प्रतिवेदनमा जघन्य अपराधमा भारतबाहेक विदेशका जेलमा ३ सय ३४ नेपाली रहेको तथ्याङक सार्वजनिक भएको हो । त्यसमा १९जनाले मृत्युदण्ड र ४६ जनाले जन्मकैदको सजाय पाएको उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको उद्धार शाखाले विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं महावाणिज्य दूतको कार्यालयसँग समन्वय गरी तयार पारेको यो प्रतिवेदन पछि…
नेपाली काँग्रेसलाई पच्छ्याउँदै एमाले, समाजवादी फोरम तेस्रोमा (विस्तृत विवरण)
September 19, 2017 Annapurna TV
प्रदेश नम्बर दुईको स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत महिले मतगणना जारी रहेको छ । राती अबेर सम्म विभिन्न ८० स्थानीय तहको मतपरिणाम अनुसार नेपाली काँग्रेसले सुरुवाती अग्रता लिएको छ । कांग्रेसले सबभन्दा बढी २३ स्थानका मेयर र अध्यक्षमा अग्रता लिएको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको एमालेले १८ स्थानीय तहमा अग्रता लिएर एकदमै कम अन्तरमा पछ्याइरहेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम १४ स्थानमा अग्रता लिँदै तेस्रो स्थानमा छ। माओवादी केन्द्र १२ स्थानमा अगाडि छ भने राजपा नेपाल १० स्थानीय तहमा अग्रस्थानमा छ।
के केपी ओली गोपाल खड्कालाई बचाउन लागिपरेका हुन् ?
काठमाडौं । सरकारले बर्खास्त गरेका आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्काका बिषयमा मुख नखोलेपछि केपी ओली खडकाका पक्षमा उभिन खोजेको आरोप लागेको छ । सदन र सडकमा समेत छरपष्ट बनेपछि सरकारले भष्ट्रचारमा संलग्न भएको आरोपसहित छानविनका लागी बर्खास्त गरेका खड्काको बिषयमा केपी ओली मौन बसेको भन्दै यस्तो आरोप लाग्न थालेको हो । त्यसो त एमाले अध्यक्ष ओलीले खड्का भरिया मात्रै भएको र भ्रष्टचार गर्ने असली मालिक अरु नै भएको बताउँदै खड्का मात्रै दोषी होईनन भन्ने आशाय मंगलबार व्यक्त गरेका थिए । नेकपा एमाले प्रदेश नम्बर १ ले मंगलबार काठमाडौमा आयोजना गरेको…
राष्ट्रपतिलाई किन टेर्दैनन् देउवा सरकारका मन्त्रीहरु ?
काठमाडौँ । तेस्रो संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको कार्यक्रममा देउवा सरकारका ६ जना मन्त्रीहरुको मात्रै सहभागिता रहेको थियो । ईतिहासमै जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भनेर चारैतिरबाट आलोचना पाईरहेका देउवा सरकारका मन्त्रीहरुमध्ये ६ जनाको मात्रै राष्ट्रपतिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति, कावा प्रधानमन्त्री, कामु प्रधान्यायाधीश, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न दलका नेता, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र उच्च पदस्थ व्यक्तित्वको सहभागिता थियो । कार्यक्रममा मन्त्रीहरुकोलागि छुट्याईएका हरेक चेयरहरु भ्याकेन्ट देख्दा सहभागीहरु खसाखस कुरा गर्दै थिए कि नेपालमा अब मन्त्रीहरु कार्यक्रममै हिँड्न छोडेछन् । सो अवसरमा नेपाल सांस्कृतिक संस्थानका…
रौतहटमा काँग्रेस कार्यकर्ताले एमाले कार्यकर्ताको टाउको फुटाए, कारण यस्तो छ
रौतहटको बृन्दावन नगरपालिकाको मत गणना स्थलमा काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । झडपमा परी एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् । विवादपछि झडप हुँदा काँग्रेस कार्यकर्ताको कुटाईबाट एमाले वृन्दावन नगरपालिका वडा नं. ६ का उम्मेवदार धर्मेन्द्र पटेल र एमाले कार्यकर्ता सुनिल पटेलको टाउको फुटेको छ । अहिले त्यहाँको स्थिती तनावग्रस्त छ । एमाले सांसद रामकुमार भट्टराई मत गणना स्थलमा पुगेपछि अन्य दलले विरोध गरेका थिए । धाँधली गर्न आएको भन्दै अन्य दलले नाराबाजी गरेपछि झडप भएको थियो । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत उदय देवकोटाका अनुसार मत गणना स्थगित भएको छ…
बर्दिवासमा भारी वर्षा, मतगणना प्रभावित
महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिवासमा भएको भारी वर्षाले मतगणना प्रभावित बनेको छ । बर्दिवासस्थित मतगणना स्थलमा पानी चुहिएपछि केहिबेरका लागि गणना स्थगित भएको हो । बर्दिवाससँगै चुरे छेत्रमा हुरीसहित ठूलो वर्षा भइरहेको छ । २ र १३ नम्बर वडा गणना सुरु गर्नै लाग्दा पानीले गणना प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । बर्दिबासको पक्की कवर्ड हलमा पानी पस्ने सम्भावना नरहे पनि चुहिएको पानीले समस्या पारेको हो । बर्दिबासको वडा नम्बर १ बाट विजयी भएका माओवादी केन्द्रका चुडामणि पोखरेल र १४ मा विजयी भएका कांग्रेसका भरतबहादुर हमालको बिजय जुलस पनि वर्षाले प्रभावित बनाएको छ…
राजविराज १५ मा उम्मेदवारी दर्ता
राजविराज । राजविराज नगरपालिका–१५ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका तर्फबाट वडाध्यक्षमा जशकरण मण्डलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । सो वडामा राजपाका तर्फबाट वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रहेका महन्थी यादवको गत शनिबार मृत्यु भएपछि निर्वाचन स्थगित भएको थियो । मुख्य निर्वाचन कार्यालय राजविराजकाअनुसार वडाको निर्वाचन असोज ५ गतेलाई सारिएको छ । सोही दिन मतदानपश्चात् मतगणना हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत शारदाप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।
गाडी बिक्रेताले दिने कमिसन खान हेर्नुहोस् यसरि हुन्छ राष्ट्रिय सम्पतिमाथीको रजाई
दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन हुनुभन्दा ठीक ६ दिनअघि ८ असारमा सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई अचानक प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘जगेडा सचिव’ मा सरुवा ग-यो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित निर्वाचन आयोगका पाँचै जना पदाधिकारीले ‘काम गर्न गाह्रो भएको’ भनेर हटाउन दिएको दबाबपछि मैनालीलाई सरुवा गरिएको थियो । ९ महीनादेखि आयोगमा कार्यरत सचिव मैनालीले आयोगका सबै पदाधिकारीलाई ‘गाह्रो हुने’ के त्यस्तो काम गरे होला ? सरुवा भएलगत्तै मैनाली आफैंले रहस्य खोले, ‘प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूका लागि प्रक्रिया छलेर महँगा गाडी किन्न नमान्नु ।’ स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई उपलब्ध गराएको…
काठमाण्डौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीनै तहको निर्वाचनपश्चात जनआकांक्षा अनुरुप मुलुकको सर्वोत्वमुखी सामाजिक आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अघि बढ्न सरकार, सबै राजनीतिक दल र आमजनता समक्ष आह्वान गरेकी छन् । तेस्रो संविधान दिवसका अवसरमा मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा जलपान समारोहमा उनले संविधानले राजनीतिक संक्रमण समाप्त गर्नुका साथै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि मार्गचित्रण प्रदान गरेको बताइन् । राष्ट्रपति भण्डरीले लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता, मौलिक हक, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसहितको दु्रत तथा आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि नेपाली जनाताको आकांक्षा र अथक संघर्षको प्रतिफलका रुपमा…